Yiziphi izindinganiso ze-SEO zakamuva kakhulu?
Namuhla, i-Google ibonisa imiphumela yosesho, okude kakhulu neyendabuko eminingi (ngisho nje ukulingana kwezindawo eziphilayo) esasizibonele eminyakeni embalwa ngaphambi. Ama-algorithms wokusesha we-Google, kanye namazinga okuqala we-SEO, qhubeka uqhubeka. Manje izinjini zokusesha zifaka okuningi kunalokho okucelayo kuphela - njengoba i-SERP ku-Google, naku-Yahoo ne-Bing ifaka manje izithombe ezihlobene, amavidiyo, imidiya yezokuxhumana, kanye namabalazwe wendawo. Ngakho-ke, uma ubheja emotweni eminingi futhi uthengisa njengomnikazi webhizinisi e-intanethi, qiniseka ukuthi uhlola amanye amazinga ebaluleke kakhulu we-SEO namuhla. Ingabe iwebhusayithi yakho idinga ukubukeka okungcono kwe-Inthanethi nokuchofoza okuningi? Khona-ke ake sihlole imikhuba emihle yesimanje ye-Search Engine Optimization:
I-SEO yasendaweni yindawo eyinhloko kuwe uma ibhizinisi lakho libheja endaweni ukufakwa ohlwini nokugxila ukuze uthole uphawu ngokuhambisana ne-Google Maps, isibonelo. Ngokusho kwamazinga we-SEO wakamuva ekusebenziseni kwendawo, ngincoma ukuthi:
Ukushiwo. Hlola isheke kabili ukuze uthole ulwazi oluqondile mayelana nebhizinisi lakho kufakwe ohlwini oluningi oluhlonishwayo kwi-Inthanethi ngangokunokwenzeka. Vele uqale ngokufakwa kuhlu kwe-Google ngokwayo. Iphuzu eliyinhloko lapha ukuvumelana kwakho, ngisho ukuthi zonke izinhlu zakho kufanele zihlanganiswe, e. g. , uma unqume ukusebenzisa into efana ne "Str. "Ngokuchaza okufishane" kweSitrato "ekhasini lakho leGoogle Izindawo, qaphela konke okuqoshiwe ukuze ubonise ngokufanayo.
Izindawo zeGoogle. Ukulondoloza i-SEO yewebhusayithi yakho, ungenza kalula izinto ezifanayo ekhasini lakho le-Google Places. Kuye kahle kahle ngokufaka izigaba ezihambelana kahle. Futhi, uma kusebenza, qinisekisa ukusungula uxhumano olulungile phakathi kwekhasi lakho kanye nekhasi lewebhu elithile lokuthutha.
ukuqina okunamandla ku-intanethi. Ngokuvamile, kunezibuyekezo ze-Google kuphela eziboniswa ohlwini lwazo lwe-SERP. Ngakho-ke, ungakha indawo enamandla kakhulu ye-intanethi yebhizinisi lakho ngokuthola izibuyekezo eziningi kusuka kwenye imithombo efana ne-Superpages, Trip Advisor, Yelp, njalonjalo.
Into elandelayo kufanele ihambisane kahle namazinga anamuhla we-SEO esebenza emkhakheni wezeMphakathi. Masibhekane nakho - lezo zikhathi lapho ukucinga ngokwayo kanye nezindlela zokuxhumana kwezenhlalo beza ngokwahlukana kudlulile esikhathini esidlule. Namuhla, yonke inethiwekhi ye-intanethi ixhomeke ngokuqinile emibonisweni ehlukene yomphakathi, njengokuthandwa ku-Facebook, ukwabelana nge-Twitter, njll. Ngaphezu kwalokho, manje imiphumela yosesho iye yaba yinto eyenziwe ngokwengeziwe kumsebenzisi wonke. Yingakho ukusebenza kwi-Social Media Marketing kuFANELE.
Ngemuva kwakho konke, ukwenza ukusebenza kwamagama akho angukhiye nemishwana eyinhloko, zama ukucabanga ngaphezulu kwabantu abaphilayo, kunokuba abashayeli bokusesha. Khumbula, ucwaningo olungukhiye wegama elingukhiye lulokhu luyisigxathu sezinga le-SEO jikelele. Ngokuphathelene nesimo sangempela samanje, noma kunjalo, okuqukethwe kwakho kuwebhusayithi kanye namagama angukhiye kufanele kube nokuphendula ngokwengeziwe kubasebenzisi bangempela kunanini ngaphambili. Yingakho kufanele uyeke ukucabanga ngamagama angukhiye njengedatha yezobuchwepheshe. Ukwenza ucwaningo oluyinkimbinkimbi, gcina engqondweni izinhloso zabantu abaphilayo abazosebenzisa amagama akho angukhiye afanele izicelo zabo zokucinga ezivame kakhulu Source .